जुन गोरुको सिङ छैन, त्यसको बिस्तारै पलाउँछ...
एउटा किसानले बिभिन्न चौपायाहरु पालेको थियो। तिमध्ये एउटा गधा पनि रहेछ। एकदिन त्यो गधा आगनछेउको इनारमा खस्यो। घरमा धेरै बर्ष काम गरेको हुनाले गधालाई सबैले माया गर्थ्ये। तर मायाले मात्र तेसलाई बचाउन सक्ने थिएन। किसानको परिवारका सदस्यहरुले छिमेकी गाउबाट क्रेन ल्याएर गधालाई इनारबाट निकाल्ने कुरा पनि सोच्ये।
तर क्रेनको खर्च गधाको मोलभन्दा निकै बदी पर्ने भयकाले त्यो idea पनि व्यावहारिक नहुने भयो। गधा एसै पनि बुढो हुन थालिसकेको थियो र घरमा tractor किनेपछी त्यो तेती काममा आयको पनी थियन । तेसैगरी घरमा खानेपानिको धारा आएपछी इनारको पनि काम सकिए जत्तिकै भएको थियो ।
यस्तै कुराले गर्दा परिवारका सदस्यहरुलाई निर्णय लिन सजिलो भयो । केहीबेरमै उनिहरु निस्कर्समा पुगे । गधा र इनार दुबै उती काममा नआयकाले दुबैलाइ त्यही पुरिदिने।
उनिहरुले गधालाई जिबनभर भारी बोकाएर आफ्नो सेवा गरेको कुरा चटक्क बिर्सिए र आफ्नो स्वार्थ हेरेर योजना पुरा गर्नका लागि इनारमा माटो खसाल्न थाले। तर धेरैबेर माटो खसाली सक्दा पनि गधा पुरिएन। उनिहरुलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो। तर उनिहरुका सामु अर्को कुनै उपाय पनि थिएन।
तैपनी गधा पुरिएन। इनार पुरिदैँ जाँदा गधा त झनझन माथि पो आउन थाल्यो। अन्त्यमा गधा इनारबाट बाइर निस्कियो।
भएको के रहेछ भने, प्रतेक पटक माथिबाट माटो खसाल्दा गधालाई दुख्थ्यो। तर, उ चुपचाप ढाडबाट माटो झार्थ्यो र त्यो बुर्बुराउँदो माटोलाई खुट्टाले अलिकती खँद्थ्यो। तेसो गर्दा गर्दा इनार पुरिँदै गयो र उ सकुशल बाहिर निस्कियो।
गधालाई मुर्ख प्रणी मानिन्छ, तर त्यो बुढो गधाको बाँच्ने संघर्शले मनिसहरुलाई चकित पर्दियो।
शिक्षा : एस कथाबाट दुईओटा शिक्षा पाईन्छ.
पहिलो हो, स्वार्थले मनिसको बुद्धी र विवेकमा बिर्को लगाइदिन्छ। गधाले जसरी आफ्नो ज्यान जोगायो, त्यही कुरा मालिकहरुले गरेको भए उनिहरुलाई विवेकशिल मान्न सकिन्थ्यो।
दोस्रो र अझ महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो, सदुपयोग गर्न जानियो भने ठुला समस्याहरु पनि अवसरमा पारीणत हुन सक्छन्।
कथा : खीर - इन्द्रबहादुर राई
त्यतिबेला मैले त्यस घटनालाई बुझ्नै सकेको थिइनँ, त्यसको केही अर्थ होला भनेर मैले सोच्नै सकेको थिइनँ। घटना, घटना नै भनूँ, यस्तो भएको थियोः हररर आवाज गर्दै टिस्टा बगेको वर्णन मैले कथाहुँदो...
खलिल जिब्रानका तीन लघुकथा
१. स्वतन्त्रता उसले मलाई भन्यो- 'कुनै दासलाई सुतिरहेको देख्यौ भने नउठाउनू। हुन सक्छ, ऊ स्वतन्त्रताको सपना देखिरहेको होस्।' 'यदि कुनै दास सुतिरहेको देख्यौ भने उठाऊ र स्वतन्त्रताबारे उसलाई...
सपना र गन्तब्य
डाईमण्ड राई : ओ... बर डाँडे साईलाकति कुध्छौ हो हतार-हतार।उधारो सपनाको भारी बोकेरआफ्नै धोती खुस्केको पनिथाहा नपाउने गरी।कुनै ज्यानमारा ब्वाँसोले लखेटे जस्तोस्याँ-स्याँ र फ्याँ-फ्याँ...
नेपाल र नेपाली सिध्याउने यिनै हुन्
चट्याङ मास्टर : हुन त मास्टर भन्ने बित्तिकै साथमा चक र डस्टर बोक्ने मास्टर भन्ने बुझिन्छ तर आज हामी यस्ता मास्टरको कुरा गर्दैछौं जसको साथमा कहिल्यै पनि हुदैंन चक र डस्टर तर पनि सबैले उनलाई...
विवाहित युवती, कफी र सेक्स : कृष्ण आचार्य
‘लौ बरवाद भयो’ मैले मनमनै भनेँ । उसले पुर्लुक्क हेरि, खिस्स हाँसी अनि मतिर हात बढाई । मैले पनि आफ्नो हात अघि बढाएँ । उसले समाई । ‘सरी ल’ मेरो हात समाएर उठ्दै उसले भनि । मैले सरी भन्नै...